Downloads 6 316
Waxay abuureen 10-08-2014
Author: FITAMIIN Storch http://speed99.webhosting.klfree.net
Download Wixii FSX & Steam Edition & P3D v1. * v2 v3 in la baaro & FS2004# Port-Over aan la socon P3Dv4 # 3D Cockpit Virtual
Z137T Zlin The (Czech: "nac-nacleyn"), waa diyaarad beeraha macmalay ee Czechoslovakia. diyaaradaha waxaa inta badan loo isticmaalaa sida cropduster ah.
Tani add-on waxaa loogu talagalay FS2004, FSX iyo vxx Prepar3D. Diyaaradeed rafaasad-hal engine la 3D qol si buuxda u shaqaysa (ma guddi 2D), oo ay ku jirto caadada u muuqataa, labada tusaale ee leh ama aan lahayn qalabka Dusting. Press "i" si aad u bilowdo faafo (release of cayayaan ama kale sida laga soo xigtay aad male) ee.